MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Teams up with CB Bank for SIM Registration MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
SIM Registration » MPT Teams up with CB Bank for SIM Registration
MPT Teams up with CB Bank for SIM Registration
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ အကြောင်းကို သိပါရစေ။
MPT နဲ့ CB Bank တို့က သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ကနေစပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မှာရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲတွေမှာ သူ့ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မယ့် CB ဘဏ် ဘဏ်ခွဲ ဘယ်နှခုလောက်ရှိပါလဲ?
စစချင်းအနေနဲ့ MPT အသုံးပြုသူတွေ သွားရောက်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြုလုပ်နိုင်မယ့် CB ဘဏ် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၂၄ ခုရှိပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ CB ဘဏ်ခွဲနေရာတွေများလာတာနဲ့အမျှ ထပ်ပြီးတိုးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တေ်ာတို့ ကြေညာပေးသွားပါမယ်။ သုံးစွဲသူတွေ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင် ရာမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့အတွက် MPT က အခြားသော မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်။
ဒီလို လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် MPT က CB Bank ကို အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတရာပေးရသေးလား?
ဒါကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မပြောလိုပါဘူး။
ဒီ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်တာလိုပဲ CB Bank က ကောင်တာတွေမှာပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ တခြား ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရှိပါသေးလား? ဥပမာအားဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်တာ၊ ဆင်းမ်ကတ် ဝယ်တာလိုမျိုးပေါ့။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲ ရနိုင်ပါတယ်။
တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီနဲ့ ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးတာ MPT က ပထမဆုံးပဲလား? တခြား ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကရော လုပ်နေတာမျိုးရှိလား?
ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
MPT မှာ သုံးစွဲသူပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ? အဲ့ထဲက ဘယ်လောက်က လက်ရှိ သုံးစွဲနေသူတွေပါလဲ?
လတ်တလောမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ယက်ကို သုံးစွဲနေတဲ့ အသုံးပြုသူပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
ဆွေသဟာ အသုံးပြုသူတွေရော ဘယ်လောက်လောက်ရှိပါသလဲ?
ဆွေသဟာ အသုံးပြုသူက ၁၇ သန်းကျော်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို ဘာကြောင့် မဖြစ်မနေ မှတ်ပုံတင်ရမှာပါလဲ?
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ဆင်းမ်ကတ်တိုင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို Mobile Money နဲ့ Mobile Banking စနစ်တွေမှာ၊ Online Shopping တွေမှာ၊ နောက်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်တွေ ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ရင် ပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့အခါ မှာ အထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာက ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားပြီးသားရှိပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် MPT Top Up Bonus ကို ရနိုင်ပါမလား?
ဝမ်းနည်းပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတည်း ဘဏ်အကောင့်သစ်ဖွင့်တဲ့ လူ တွေသာ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MPT ငွေဖြည့်လက်ဆောင်က ဘယ်လောက်ထိ ရရှိမှာပါလဲ?
CB ဘဏ်ကောင်တာမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အသုံးပြုသူတွေ မှတ်ပုံတင်နိုင်မယ့် နေရာပေါင်း ဘယ်နှနေရာရှိပါလဲ၊ ဘယ်နားတွေမှာလဲ?
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် CB Bank ဘဏ်ခွဲ ၂၄ ခုအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ MPT အရောင်းဆိုင် ပေါင်း၃၀၀ ကျော် ရှိနေပြီပါတယ်။ MPT website မှာ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတွေက ဆင်းမ်ကတ်တွေကို website နဲ့ mobile application တွေကလိုမျိုး တခြားနည်းလမ်းနဲ့ရော မှတ်ပုံတင်နို်င်ပါသလား?
MPT သုံးစွဲသူတွေက သူတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ MPT အမှတ်တံဆိပ် ဆိုင်ခွဲတွေမှာ သွားရောက်မှတ်ပုံတင်နိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုပဲ ပိုအဆင်ပြေစေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါ တယ်။
CDMA 450 နဲ့ 800 အသုံးပြုသူတွေကရော သူတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်သေးလား? MPT မှာ CDMA အသုံးပြုသူ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ?
ကျွန်တေ်ာတို့ဆိီမှာ CDMA အသုံးပြုသူ အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ သူတို့လည်းပဲ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူ သန်း ၂၀ ထဲမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အမီ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရဲ့ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆင်းမ် ကတ်တွေအကုန်လုံး မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Locations of the CB Banks where customers can register their SIM cards